Buru obi na HS
Ọtụtụ mama ọhụrụ na-eme mkpesa mgbe ha hụrụ dọkịta na ha nwere ihe mgbu obi mgbe ha na-aṅụ ara (GV). E nwere ọtụtụ ihe kpatara nke a. Ya mere, isi ọrụ nke dọkịta bụ iji chọpụta ihe mere ka mmepe a mebie.
N'ihi gịnị ka obi na-egbu mgbe ị na-agba lactation?
Nkọwa nke ihe mere obi ji enwe ike ịka njọ n'oge ị na-ara ara bụ lactostasis. Site na okwu a na nkà mmụta ọgwụ bụ ihe mebiri nke oke mmiri ara ehi, ya bụ. nchịkọta nke mmiri ara ehi ara ehi nke ara. Ịmata ya na nne ya agaghị esi ike.
Dịka iwu, na nke a mebiri, n'oge palpation nke mammary gland obere obere tubercle ma ọ bụ nodule bụ probed. Ọ bụrụ na nne na-eto eto adịghị ewe oge (ịhịa aka n'ahụ, mmega ahụ), mgbe ahụ lactostasis nwere ike ịga mastitis.
Site na mmepe nke mastitis n'oge ị na-ara nwa, ahụ ọkụ nke nwanyi na-ebili ma obi ya amalite ịrịa. N'ọtụtụ ọnọdụ, ụdị ihe mgbu na-esi ike. Ọrịa a kpatara site na njikọ nke usoro ọnyá. Ọ na-abụkarị na pathogen na-abanye na cracks na nipples, abrasions. Ihe mgbaàmà dị ukwuu nke ụdị ọrịa ahụ bụ ọdịdị nke ọzịza, ọzịza nke obi, ọbara ọbara na-acha ọbara ọbara, ọnụnọ nke akàrà, obi na-acha ọkụ site na aka.
N'ọnọdụ ebe obi na-afụ ụfụ na HS, ọ dịghịkwa akara na ọkpụkpụ, ihe kpatara mgbaàmà a nwere ike ịbụ ịṅụ mmiri ara ehi n'oge nri. N'otu oge ahụ, ndị inyom na-eme mkpesa banyere mmetụta nke ịkụ aka n'ime obi, ịdị arọ. N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, iji zere ịdị na-achọpụta, ọ dị mkpa iji gosipụta obi mgbe ị na-eri nwa ahụ.
Na mgbakwunye na nke dị n'elu, a na-ahụ ihe mgbu obi mgbe ị na-agụ akwụkwọ n'ihi imebi iwu nke ngwa. Nke a na-eme ọtụtụ mgbe, karịsịa nne na-eto eto. Iji wepụ nke a, ọ dị mkpa ịgbaso ndụmọdụ ndị e nyere otu nwanyị ka nọ n'ụlọ ọgwụ.
Kedu ihe m kwesịrị ime ma ọ bụrụ na obi m na-afụ ụfụ?
N'ọnọdụ ndị ahụ mgbe nne nọọsụ kwenyesiri ike na ihe kpatara ihe mgbu ahụ bụ na ọ bụ mmiri ara ehi, ọ dị mkpa iji mepụta ịhịa aka n'ahụ. Ọzọkwa, mmega ahụ dị otú ahụ na-enyere aka ịnagide nsogbu a: site n'ịnye aka gị n'ihu gị, na-ehulata ha na nkuku, na aka aka n'ime mkpọchi ahụ. N'okwu a, tinye obere bọl n'etiti ọbụ aka. Bido bọl ahụ nke nta nke nta, gbasaa mgbalị ahụ. Ị ga-eche otú akwara ụbụrụ gị si akpa, na-eme ka nrụgide na mammary glands ma na-enyere aka iweghachite akụkụ ahụ.
Ya mere, nne na-enye nwa ara kwesịrị ịmara ihe mere ara na-esi na-afụ ụfụ n'oge GW, ka ọ ghara ịjụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị mastitis, kama ka oge na-aga iji ihe ndị dị mkpa.
Uwe maka ndị nọọsụ
Valerian na HS
Rosehip na-enye nwa ara
Furvex na lactation
Enwere ike ịṅụ kefir mgbe ị na-enye nwa ara?
Cucumbers na-enye nwa
Kanefron na lactation
Ọgwụgwọ oyi na-enye nwa ara
Mmiri arahụ - gịnị ka m kwesịrị ime?
Bromocriptine maka nkwụsị nke lactation
Nri mgbe ị na-azụ nwa amụrụ ọhụrụ
Ọ nwere ike ịkwụsị n'oge ị na-ara nwa?
Ihe ndị inyom na-eji oké okpomọkụ eme ihe
Nri na egbugbere ọnụ n'oge ime ime
Pies na yabasị na akwa
Snot na naething
Eschsolcia - kụrụ ma lekọta
Uwe nwanyi na ikpere
Dopel Hertz maka ụkọ ọnwụ
"Etu ọka" - otu klas
Kedu ihe ị ga-eri nwa anụ ahụ?
Na China, na-eme ihe nile, na ọbụna Paris!
Ngwunye ọkwa enamel
Ilu banyere mmiri maka ụmụaka
Tunku National Park Abdul Rahman
Azu akwukwo nri na anu ogwu
Balyk si na ọkụkọ ara na-n'ụlọ
Ụdị ụdị n'ụdị
25 ihe e kere eke, nke dị mkpa ka ị mee ngwa ngwa mee ụkwụ gị
Nri salmon na ude
Mkpochapu nke mpaghara ime bikini
Nri Na-agba Ọkụ